26 Jun, 2014 - 16:06	 2014-06-26T16:12:40+00:00 2014-06-26T16:12:40+00:00 0 Views
MHINDURO DZEMIBVUNZO YESVONDO RAPERA:
Zadzisa kuti vanhu vazhinji vanenge vachifamba vari pamwe chete vanonzi chii?
Pane vana vakapindura mibvunzo yemasvondo maviri adarika. Ndinoti rambai muchidaro uye vamwe itaiwo zvimwe chete kupindura mibvunzo yatinokupai kana kutibvunza zvamungada kuziva. Hevanoi vamwe vacho:
Rutendo Maradzike ari muGrade 1 paHarava Primary, Jerera kuZaka anoti:
Ndibatsireiwo nemazwi anotanga na”dzv” neanotanga na”nzv”. Ndatenda uye ndichafara kana ndawana mhinduro nekuti chiShona chinondinetsa. Mhinduro: “dzv” (dzvanya, dzvinyu, dzvova, dzvura, dzvokora, dzvuta, dzvatsvatsva); “nzv” (nzvimbo, nzvenga, nzvera, nzvanzvana, nzvarakamwe, nzvenzvera)
Elvis Mwanza wemuGrade 6 paMurombedzi Primary School anoti:
Mazita maviri anoreva vanhu vakamira kana vakagara ndimhomho nechaunga.
Theresina Mhlanga ari muGrade 4C paChitsere Primary School, kuMbare, muHarare anotiwo:
Mazita maviri anoreva vanhu vakamira kana vakagara ndimhomho nechakata.
Ison Kanyoka wepaManyenyedzi Primary School, kwaChundu kuKaroi ndokuti: Vanhu vakaungana pamwe chete vakagara kana kuti vakamira vanonzi mhomho kana kuti chaunga.
MIBVUNZO YESVONDO RINO:
1. Huni dzakawanda dzakasungwa pamwechete dzinonzi chii?
2. Miti yakawanda iri munzvimbo imwechete inonzi chii?
Mhinduro dzemibvunzo yesvondo rino muKwayedza resvondo rinouya.